Markhaatiyaasha Yehowah Walaalahooda Silicsan Sidee Bay u Caawiyaan?
Walaalaheen Silicsan Sidee Baan u Caawinaa?
Markay masiibo dhacdo Markhaatiyaasha Yehowah isla markii waxay qorsheeyaan kuwa dhibaatada gaartay sida loogu gargaari lahaa. Tani waxay muujisaa jacaylka runta ah aan isku qabno. (Yooxanaa 13:34, 35; 1 Yooxanaa 3:17, 18) Sidee baan u caawinaa kuwa dhibaataysan?
Lacag baan u dirnaa. Markaan ogaano inay walaalaheen ku jiraan xaalad daran meeshay deggan yihiinba waan caawinaa. Kiniisaddayada baan caawimo iyo lacag uga dirnaa sida kuwa aad u dhibban loo kaalmeeyo. (2 Korintos 8:13-15) Sidoo kale markay Yahuudiya abaar weyn ka dhacday Kirishtaankii hore ee joogay Antiyokh walaalahood waxay u direen lacag siday u caawiyaan.—Falimaha Rasuullada 11:27-30.
Si waxtar leh baan dadka u caawinaa. Odayaasha jooga meesha ay masiibo ka dhacday waxay raadiyaan mid walba oo kiniisadda ka mid ah inuu nabad qabo oona laga warqabo. Waxaa la abaabulaa koox qorsheysa qaybinta cuntada, biyaha, dharka, dawo iyo hooy. Markhaatiyaal badan oo haysta sancadaha loo baahan yahay baa doorto inay lacagtooda ku aadaan meesha looga baahan yahay. Walaalahood bay u gargaaraan oo waxay dayactiraan guryaha iyo Hoolalka Boqortooyada. Midnimadeenna iyo waaya aragnimada aan helnay markaan isla shaqeyno baa suuraggelisa inaan walaalaheen degdeg u caawino waqtiyada ay dhibaatada jirto. Ugu horrayn kuwaan isku rumaysad nahay baan kaalmeynaa laakiinse dadka kalena markaan karayno waan taageernaa diintay yihiinba.—Galatiya 6:10.
Dadka Kitaabkaan ku qalbi qaboojinaa oo kuwa murugaysanna garab baan u noqonnaa. Dadka masiibo gaartay aad bay ugu baahan yihiin qalbi qaboojis. Mararkay dhibaatadu jirto waxaa ina xoojiya Yehowah “Ilaaha gargaarka oo dhan.” (2 Korintos 1:3, 4) Dadka murugaysan aad baan u rabnaa inaan la wadaagno ballamaha Kitaabka siday uga helaan kalsooni. Waxaan la wadaagnaa kalsoonida Boqortooyada Ilaah inay joojin doonto belo, murugo iyo rafaad.—Muujintii 21:4.
Markay masiibo dhacdo maxay Markhaatiyaasha Yehowah dadka degdeg ugu gargaari karaan?
Sidee baan Kitaabka ugu qalbi qaboojin karnaa kuwa ka badbaaday dhibaato?
Wadaag Wadaag Walaalaheen Silicsan Sidee Baan u Caawinaa?